Global Voices teny Malagasy » Translator Newsletter: Mampody indray ny atidoha, fitiavana amin’ny fandikan-teny sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jona 2019 16:57 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Fantatrao ve fa mamerina indray ny atidohanao ny fahaizana fiteny roa? Araka ny voalazan’ ity lahatsoratra mahafinaritra  avy amin'ny World Economic Forum sy Quartz ity, dia “milaza ny mpikaroka fa afaka manova tanteraka ny rafitry ny atidohanao ny fifehezana fiteny roa”. Vakio raha hijery ny momba izany ary jereo ity lahatsary mahafinaritra navoakan'izy ireo tao amin'ny Facebook ity, izay mamintina ilay lahatsoratra.
Amin'ny maha-matihanina antsika eo amin'ny sehatra misy antsika, dia mitady fomba hivoarana hatrany isika amin'ny maha-mpandikateny ary lasa mendrika kokoa amin'izay ataontsika. Ao amin'ity fizarana “”Manontany Mpandika Teny miaraka amin'i Daniel Hahn “, niresaka izay azon'ireo mpandika teny atao mba hanatsarana ny fahaiza-manaony sy ny firesahany momba ny zava-drehetra tamin'ny atrikasa goavana momba ny zavatra tsotra toy ny famakiana sy fanoratana izy. Vakio ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo! Manana ny torohevitrao manokana hozaraina ve ianao?
Ary ankehitriny, ny ampahan'nyho an'ireo manatalenta amin'ny taratasim-baovaontsika! Efa teo daholo isika rehetra – manao asa ho an'ny mpanjifa isika ary tsy heno intsony izy ireo amin'ny fandoavam-bola. Nanandrana nandefa mailaka sy fampahatsiahivana nefa mbola tsy nahazo karama tamin'ny asa mafy nataontsika. Aza matahotra intsony! Ireo olona mahafinaritra ao amin'ny Hubspot dia nametraka lisitra misy ireo Paikady sivy mahasoa mba hahazoana mpanjifa mandoa karama ara-potoana . Manana ny toro-hevitrao manokana tsy miseho ato amin'ity lisitra ity ve ianao? Zarao izy ireo!
Raha sambany mamaky ity gazety ianao ary te-hiaraka amin'ny Global Voices dia lazao anay bebe kokoa eto ny momba anao !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/24/140259/
 ity lahatsoratra mahafinaritra: https://www.weforum.org/agenda/2016/02/how-being-bilingual-rewires-your-brain/?utm_content=bufferf1bc7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 ity lahatsary mahafinaritra : https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10153629419691479/
 Manontany Mpandika Teny miaraka amin'i Daniel Hahn: http://www.asymptotejournal.com/blog/2016/08/03/ask-a-translator-with-daniel-hahn-3/
 ato ny lahatsoratr'i : http://www.newyorker.com/magazine/2016/08/08/lauren-collins-learns-to-love-in-french
 Paikady sivy mahasoa mba hahazoana mpanjifa mandoa karama ara-potoana: http://blog.hubspot.com/marketing/clients-pay-ontime#sm.00000t07a1hf5fdufpkf9b217vd2u
 lazao anay bebe kokoa eto ny momba anao: https://globalvoices.org/lingua/translator-application-form/